Ireo Mpitarika Travel Eran-tany dia matoky ny fanarenana tanteraka ny dia amin'ny taona 2023
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ireo Mpitarika Travel Eran-tany dia matoky ny fanarenana tanteraka ny dia amin'ny taona 2023
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fanadihadiana vaovao nataon'ireo manam-pahaizana momba ny indostrian'ny fitsangatsanganana eran-tany, notarihin'i Collinson sy CAPA - Center for Aviation (CAPA), dia mampiseho fitomboan'ny fiandrasana ny fiverenan'ny dia mankany amin'ny ambaratonga mialoha ny areti-mifindra amin'ny taona 2023, mifanohitra amin'ny andrasana tamin'ny 5 volana lasa izay.
Ny fiantraikan'ny dia eo amin'ny fahasalamana, ary koa ny tahotra ny hosoka amin'ny fitsangatsanganana sy ny antontan-taratasy fitsapana, dia antenaina fa hijanona ho olana lehibe amin'ny mpandeha.
Ny fitsangatsanganana ara-barotra sy lavitra dia mijanona ho fizarana fitsangatsanganana miadana indrindra amin'ny 2022; Ny fialan-tsasatra fohy dia mahita ny fiandohan'ny fifohazana.
Nihena ny fihatsarambelatsihy tany Azia Pasifika, satria ireo manam-pahaizana momba ny fiaramanidina sy ny fitsangatsanganana zokiolona dia mijanona ho malina kokoa noho ireo mpiara-miasa manerantany.
Satria ny tontolo iainana fitsangatsanganana dia mitohy mampifanaraka amin'ny ny fihanaky ny valan'aretina Covid-19, andiany faharoa vao navoakan'ny "Asia Pacific Travel Recovery Report" avy amin'i Collinson, traikefa amin'ny fitsangatsanganana farany amin'ny farany, serivisy amin'ny seranam-piaramanidina ary orinasa fitsaboana fitsangatsanganana, ary ny CAPA - Center for Aviation (CAPA), dia mampiseho ny indostrian'ny dia farany indrindra. faminaniana momba ny fanarenana - anisan'izany ny andrasan'ny mpandeha - amin'ny taona ho avy sy any aoriana.
Ny fanadihadiana be dia be momba ny C-Suite 400 mahery sy ny manam-pahaizana momba ny indostrian'ny fitsangatsanganana amin'ny ambaratonga ambony amin'ny marika fitsangatsanganana eran-tany dia manambara fa raha 37% amin'ireo namaly no manantena ny "fahasitranana tanteraka" amin'ny 2019 alohan'ny areti-mifindra amin'ny taona 2023 - raha oharina amin'ny 35% tamin'ny fanadihadiana tamin'ny Aprily 2021 - ny fanantenana fa ho tratra ny tsimatimanota omby any Etazonia, UK ary firenena mandroso vitsivitsy dia nihena avy amin'ny 33% ho 24%. Ankoatr'izay, ny ahiahy momba ny valin'ny fitiliana Covid-19 hosoka sy hosoka dia mbola mampanahy ireo mpamaly.
Ny fanadihadiana dia nataon'i Collinson tamin'ny volana septambra 2021 miaraka amin'ny CAPA - iray amin'ireo loharanom-pahalalana momba ny tsena azo itokisana indrindra eran-tany ho an'ny indostrian'ny fiaramanidina sy ny fitsangatsanganana - hanohizana ny fandalinana ny fanarenana ny indostria ary haminavina ny traikefan'ny mpandeha.
Misokatra indray ny sisintany
Ny polarization momba ny fanaraha-maso ny dia, ny fitsapana ary ny politika dia mijanona eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fepetra takian'ny tsena, ny protocols ary ny fandrefesana izay mitohy miova mandritra ny volana vitsivitsy.
Izany hoe, mitombo isa ny manam-pahaizana ankehitriny manantena fanokafana indray ny sisintany Ny fandaharan'asan'ny governemanta hanamaivanana na hanamaivana be amin'ny taona 2022 (43%), raha ny ampahatelon'ny mpamaly eran-tany (32%) kosa dia mbola manantena ny hivoatra amin'ny tahan'ny hafa amin'ny tahan'ny hafa amin'ny taona 2022 ny fampandehanana ny sisintany. 2021%, izay nanjakan'ny tsy fahatokisana.
Mijanona ny fitiliana, miaraka amin'ny confinement natsahatra
Maneho fahatokisana amin'ny protocols fitiliana ahafahana miverina amin'ny dia lavitra kokoa, mihoatra ny antsasany (54% - fitomboana 3% nanomboka tamin'ny volana aprily) dia manantena fa ny fitiliana Covid-19 matanjaka dia hijanona ho fanalahidin'ny fanokafana indray ny sisintany mandra-pahatongan'ny faran'ny taona 2022, miaraka amin'ny 26 fanampiny. % manantena izany hatramin'ny faran'ny taona 2023. Ity toe-tsaina ity dia azo jerena amin'ny fanokafana indray ny sisintany farany teo amin'ny tsena toa an'i Singapore, Aostralia ary Etazonia - izay samy milaza ny fitsapana Covid-19 ho singa fototra amin'ny fampihenana ny quantine na ny confinement. -dia maimaim-poana.
Izany hoe, 74% amin'ny manam-pahaizana no miahiahy amin'ny tatitra momba ny valin'ny fitsapana Covid-19 hosoka sy ny pasipaoro fanaovana vaksiny. Ny haavon'ireo "tena miahiahy" dia niakatra avy amin'ny 38% tamin'ny Aprily 2021 ka hatramin'ny 41% tamin'ny Septambra 2021 ary ho an'ny "malahelo kely" avy amin'ny 28% tamin'ny Aprily 2021 ka hatramin'ny 34% tamin'ny Septambra 2021. 30 zotram-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary mpanome teknolojia eran-tany mba hanampy amin'ny fampiharana ny fizotran'ny fanamarinana nohatsaraina any amin'ireo toby fisavana lehibe amin'ny dia, ary koa ny fanaovana fitiliana Covid-19 azo itokisana sy ekena ho mora idiran'ny mpandeha.
Maneran-tany, saro-kenatra amin'ny telo ampahefany (72%) dia nizara ny fiheverana fa ny antontan-taratasin'ny vaksiny dia "zava-dehibe", ary ny ankamaroan'ny governemanta dia tsy atahorana hanokafana sisintany raha tsy misy azy ireo. Nitombo 5% izany raha oharina tamin’ny fianarana tamin’ny volana aprily. Mifanohitra amin'izany, latsaky ny ampahadimy (18%) no nihevitra azy ireo ho “tsy manan-danja”, satria ny governemanta sasany dia mamela ny fidirana na inona na inona antontan-taratasy momba ny fahasalamana nomerika.
Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny firenena iray ny mpandeha iray, dia miatrika confinement izy ireo avy eo. Efa ho ny roa ampahadimin'ny manam-pahaizana (38%) izao no manantena fa hijanona amin'ny ho avy ny fepetra momba ny confinement ho fitandremana fiarovana fanampiny ho fanampin'ny vaksiny sy fitsapana, niakatra 23% tamin'ny Aprily 2021.
Mifanohitra amin'izany, maro amin'ireo mpitarika indostria no mbola manantena ny hetsika efa akaiky amin'ity faritra ity. 42% no mino fa hatsahatra amin'ny faran'ny taona 2021 ny fepetra fanaovana confinement, mifanaraka amin'ny fanaovana vakisiny sy ny fepetra fitiliana izay mihamitombo hatrany. Na izany aza, nihena ny fihetseham-po raha oharina amin'ny 58% izay nitovy finoana tamin'ny Aprily 2021.
Ny toe-tsain'ny mpanao dia lavitra
Ny ampahany betsaka amin'ny manam-pahaizana no mino fa "tena azo antoka" ny dia raha manaraka ny vahaolana fisorohana ny rehetra (ohatra, ny fanaovana saron-tava, ny fanalavirana ny fiaraha-monina). Saingy izany dia nilaza fa nihena 17% ny isa (42% voarakitra tamin'ny volana septambra; 59% tamin'ny volana aprily), nanoro hevitra ny fihenan'ny fahatokisana na dia eo aza ny fiparitahan'ny vaksiny miely patrana, ary nomena ireo nuances isan-karazany momba izay mety heverin'ny olona ho azy. vahaolana azo antoka.
Toy izany koa, nitombo avo roa heny ny olona ao anatiny mihevitra ny dia ho “tsy azo antoka” fotsiny: nanomboka tamin'ny 4% tamin'ny Aprily 2021 ka hatramin'ny 10% tamin'ny Septambra 2021. Izany dia manondro ny fahafahana manome toky, manabe ary mampita amin'ny mpandeha hoe ahoana ny fiarovana ny fiarovana, indrindra fa ny maro kokoa ny mpandeha eny an-danitra.
Tsy mahagaga raha mbola mipetraka ny fanontaniana raha afaka miala sasatra sy miala sasatra ny mpandeha rehefa voafandrika ny drafitra. Tsy azo inoana, araka ny fanadihadiana, miaraka amin'ny telo ampahefatry ny manam-pahaizana (79%) nisafidy ny hino fa ny fitsangatsanganana dia hahatsapa "manahiran-tsaina kokoa" noho ny talohan'ny valan'aretina (hatramin'ny 70% tamin'ny Aprily 2021).
Ny valiny dia mampiseho ny faniriana hitombo kokoa ny "halavirina amin'ny vahoaka mikorontana" miaraka amin'ny fidirana haingana sy ny traikefan'ny efitrano fandraisam-bahiny tiana, ho fiadanan-tsaina. Izany dia mifanaraka amin'ny Priority Pass maneran-tany mba hanatsarana ny traikefan'ny trano fandraisam-bahiny ho an'ny mpandeha; miaraka amin'ny fampidirana ny Be Relax Spas ho an'ny fialan-tsasatra farany alohan'ny sidina, ary ny fanatitra sakafo sy zava-pisotro tsy misy fifandraisana toy ny Ready 2 Order dia napetraka hampitombo avo roa heny ny fisiany manerana ny efitrano fandraisam-bahiny ho an'ny traikefa fisakafoanana tsy misy fotony.
Reboot miadana ho an'ny fitsangatsanganana ara-barotra
Na dia niverina tamim-pitandremana tamin'ny tsena sasany aza ny fitsangatsanganana fohy sy ny fitsangatsanganana orinasa, dia nisy hetsika kely teo anelanelan'ny fanadihadiana tamin'ny Aprily 2021 sy Septambra 2021. Amin'ny faminaniany ny fitsangatsanganana amin'ny 2022, mihoatra ny ampahatelony (35%) amin'ireo namaly no manantena ny fanarenana 41-60% amin'ny haavon'ny 2019 mialoha ny areti-mifindra amin'ny fitsangatsanganana ara-barotra fohy, raha 23% kosa no tsara kokoa ary manantena ny hahatratra 61-80% amin'ny taona 2019 amin'ny taona manaraka. 8% ihany no mahita 80%+ amin'ny ambaratonga 2019 amin'ny taona ho avy - manondro ny fametahana ny dia mijanona ao amin'ny "feo vaovao".
Any Azia Pasifika manokana, 24% fotsiny no mahita fitsangatsanganana fohy amin'ny orinasa miverina amin'ny 61% amin'ny ambaratonga 2019 amin'ny herintaona - ary 7% no mahita ny fangatahana mahatratra efatra ampahadimin'ny ambaratonga 2019.
Ny fitsangatsanganana ara-barotra lavitra no mijanona ho lavitra indrindra. Ny fanarenana ny haavon'ny taona 2019 dia antenaina haharitra ela kokoa noho ny ampahany hafa, miaraka amin'ireo mpamaly dia lasa tsy matoky tena amin'ny vanim-potoana fanarenana ny fizarana, noho ny fameperana fitsangatsanganana mijanona lavitra lavitra noho ny efa noeritreretina. Araka ny filazan'ny 86% amin'ireo namaly, latsaky ny roa ampahatelon'ny tsenan'ny fitsangatsanganana ara-barotra/orinasa dia hiverina amin'ny taona manaraka. Raha any Azia Pasifika, latsaky ny ampahatelony (30%) amin'ireo namaly ny fanadihadiana no mino fa tsy hahatratra 20% amin'ny haavon'ny taona 2019 akory isika amin'ny taona ho avy.
Raha niresaka momba ny fikarohana, Priyanka Lakhani, Tale ara-barotra Afovoany Atsinanana sy Afrika ary talen'ny Azia Atsimo, Collinson dia nilaza hoe: "Ity fikarohana mitohy ity dia tena ilaina amin'ny fahatakarana ny fihetseham-pon'ny indostria ary vokatr'izany, ny fandraisana ireo dingana ilaina mba hiantohana ny fiarovana sy maharitra. fiverenan'ny dia maneran-tany. Ao anatin'ny enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo volana, fara fahakeliny, dia mazava fa amin'ny maha-indostria antsika dia tsy maintsy manohy manavao sy mampita tsara ny fandrosoana amin'ny mpandeha isika. Amin'ny volana ho avy, ny tena hifantohantsika dia amin'ny famolavolana fitaovana sy vahaolana izay manampy ny mpandeha amin'ny fandehanana am-pilaminana sy amin'ny fomba mahomby. "
CAPA - Talen'ny Mpitantana Foiben'ny Aviation, Derek Sadubin, dia nanampy hoe: "Tombontsoa ny niara-niasa indray tamin'i Collinson, mpitarika manerantany amin'ny traikefan'ny mpandeha, mba hanombantombana bebe kokoa ny fomba fijerin'ny mpihaino manam-pahaizana ambony momba ny tontolon'ny fitsangatsanganana ho avy. Ny zava-bitany dia sady mahatsikaiky, ary amin'ny toe-javatra sasany dia mahagaga. Amin'ny ankapobeny, tsy maintsy mivondrona ho toy ny indostria isika ary mampiasa ireo hevi-baovao ireo mba hamantarana hoe aiza no ilaina ny fifantohana mba hampandrosoana ny fiverenan'ny dia maneran-tany. "